Kugara neInvestment yeUkraine neGolden Visa
● Kugara nekudyara kweUkraine nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muUkraine uye Magweta e Kugara patsva neInvestment muUkraine uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muUkraine zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara patsva nemaInvestment vamiririri kuUkraine kunopa mabasa ekugara nekudyara muUkraine, Kugara nehurongwa hwekudyara muUkraine, Kugara nehurongwa hwekudyara muUkraine, kwechipiri Kugara nekudyara muUkraine, hunyanzvi hwekugara nekudyara muUkraine. , Kugara zvechigarire nekudyara muUkraine, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muUkraine, Kugara nehurongwa hwekudyara muUkraine, Kugara nenzvimbo dzekudyara muUkraine, Ugari nekudyara muUkraine, Ugari nezvirongwa zvekudyara muUkraine, Ugari nehurongwa hwekudyara muUkraine, wechipiri Citizenship kubudikidza inivhesitimendi muUkraine, hunyambiri Ugari nekudyara muUkraine, pekugara uye ugari nekudyara muUkraine, ugari uye ugari nekudyara muUkraine, hupfumi Citizenship zvirongwa muUkraine, Citizenship neinvestment scheme muUkraine, Citizenship nekudyara zvirongwa muUkraine, chechipiri pasipoti muUkraine, wechipiri passp ort zvirongwa muUkraine, yechipiri pasipoti chirongwa muUkraine, mbiri repiri pasipoti muUkraine, pekugara uye yechipiri pasipoti muUkraine, repamutemo repasipoti repashure muUkraine, yechipiri pasipoti nekudyara muUkraine, yechipiri ugari pasipoti muUkraine, yechipiri pasipoti chirongwa muUkraine, chechipiri zvirongwa zve passport muUkraine, kugara uye vhiza yegoridhe muUkraine, mugari vhiza mugari muUkraine, chirongwa chendarama vhiza muUkraine, zvirongwa zvegoridhe vhiza muUkraine.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muUkraine nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muUkraine ye Residency nekudyara: EUR 100,000
Nhanganyaya Ukraine uye Residency kubudikidza Investment
Ukraine ndeyeEastern Europe. Hupfumi hwekucheka hweUkraine hwakagadzirwa sechikamu chakakosha chehupfumi hwakakura hweSoviet Union. Ipo ichitambira chipiro chakadzikama cheSoviet Union yekufungidzira matura uye ichigadzira yakanyanya kuwanda yezvigadzirwa ine yakaderera yakatarwa kukosha, Ukraine yaive nesarudzo yekuendesa chikamu chakakura chegoho rakazara mune ano uye kunyanya nzvimbo dzekurima dzehupfumi hweSoviet. . Muchokwadi, pakati nepakati kurongeka kuchinjanisa kuwanda kubva kuUkraine, ichiwedzera kusvika chikamu chimwe muzvishanu chemubhadharo weveruzhinji, ichibatsirwa nemari yekufambira mberi kwemari muzvikamu zvakasiyana zveSoviet Union, Russia neKazakhstan.
Chikafu chakaringana uye kazhinji chine mwero! Kunyange hazvo mumwe asingakwanise kutarisira kuisirwa chikafu chekudya chinowanikwa muUS kana nyika dzekuMadokero eEurope, zvinogutsa neinenge nongedzo yemumwe munhu.
Nharaunda Yekutakura yakanyanya mari! Mumwe anogona kufamba chero nzvimbo mukati meguta kune 1 Grevnah! Rangarira Grevnah iri panenge 1 / yechishanu yedhora reUS kana madhora makumi maviri. Muchiitiko chekuti mumwe atore imwe yemethane-inodzorwa yakawanda yakatakurwa kutakura, ingori chikamu chikuru cheGrevnah kana gumi peni!
Ukraine ine pasina mubvunzo yakawandisa yakawanda yeanofadza madzimai! Kana iwe uine mukana wakakwana wekuroora neumwe unofadza hunhu uye kwete yegoridhe-digger, ichaita kuti hupenyu hwako muUkraine huve nyore, zvisinei, hazvina kukosha zvachose. Kana iwe uchifara kutenga imba pano, zvichave zviri nyore kugara pano pasina zvinonetsa.
Izvo chero chinhu asi chakaoma kuteedzera pasi makwapa uko munhu anogona kuchinja mafomu emari anosanganisira madhora ekuAmerica, maPondo eBritish, maRubles eRussia, uye, zviripachena, maEuro. Mhando mbiri dzakasiyana dzemari dzinogona kutengeswa pano zvisinei nekutarisisa kwavari hazvisi izvo zvinokurumidza kuvhurika. Izvi zvinosanganisira madhora eAustralia nemaSwitzerland maFrench.
Mari yekudyara yemabhangi yemari yakakwira zvakanyanya pano! Izvo zvakasarudzika zvakapusa kuwana mutsindo uye akasimba kugadzikana mabhangi, ayo anobhadhara iyo 12.5% ​​premium mune yemunharaunda mari. Chimwe chirevo chakakwira se17% zvisinei hachiwanzo kuvimbika. Ose Raiffeisen (YeAustria Bank iyo inoshanda pamwe pano) uye OTP (Bhengari reHungary) rakavimbika zvikuru uye rinowanikwa zviripo muUkraine.
MaATM anowanikwa munzvimbo dzakawanda kwese kwese munharaunda dzemumaguta. (Zvisinei, pamwe haungawane iyo ine imwe yeChirungu imwe nzira).
Kune mashoma maSuper Markets akapararira kwese kwese mumadhorobha zvakangofanana nemisika isinganetsi yemisika yakavhurika uye inomira padyo nenzvimbo yega yega. Zvisinei nekuti iyo assortment inogona kuvharirwa, zvitoro zvakajairika zvinowanzo kuve nzvimbo dziri nani dzekutenga zvinhu zvakavimbika zvikuru.
Kufungidzirwa kwemakiriniki muUkraine (kune vagari) mahara! Chimwe chinodiwa kungobhadharira zvakatemwa uye nezvimwe zvinoenderana zvinotarisirwa kuzvitarisira Iko kufunga kwaive nehunyanzvi uye hwaigona kunyangwe zvisiri kushandisa chazvino hunyanzvi hunowanikwa kumwe kunhu!
Nyika inogona kutengwa pano (Dachias) yemari shoma se $ 4000.00 kusvika $ 5000.00 USD! Iyo Dachia inowanzo kuve nzvimbo inoburitsa chidimbu kubva kuguta munzvimbo yenyika iyo isingawanzotarisirwa kuti igare ichirarama. A Dachia kazhinji ine mvura inoyerera (inowanzo kuve yekunze kune chimiro) uye simba. Kazhinji inongova neimba yekunze yemahofisi etoilet. Chero zvazvingaitika, vanogona kugadziriswazve zvine mutengo zvakachipa. Mazhinji ari pachokwadi padyo nekumira kwekufambisa.
Zvinowanzoreruka kutsvaga vanhu vemuno vangade kuvandudza yavo Chirungu kugona. Pakati pemitsetse iyi, hazvina kuoma kuteedzera pasi kubhadhara vadzidzi veChirungu kurovedza.
Kujairirana nechimwe kana chimwe chiRussia kana chiUkraine hakuna kukosha kuti utarise zvinhu zvakajairwa sekutenga uye kupinza kana kufamba kwemukati.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeUkraine
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muUkraine
Kugara nekudyara kweUkraine
Permanent pekugara visa yevarimi
Processing nguva yekugara nekudyara kweUkraine
Mushure memakore mashanu ekugara zviri pamutemo Ukraine
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veUkraine
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweUkraine
> Maritime & chivakwa chengarava
> IT masevhisi
> Mining neMetali
> Zvivakwa uye kuvaka
> Kubhengi uye mabasa emari
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweUkraine
Ukraine inyika inobatanidza Europe neRussia Federation. Nyika ine mapurazi akapfuma kwazvo, ayo anogadzira mutengesi mukuru wezviyo pasi rese. Nyika ine zviwanikwa zvakawanda simbi, simba, makemikari nezvimwe. Nyika ine yakakura mutero system. Ukraine inzvimbo yemabhizimusi matsva. Guta guru renyika iri Kiev. Kugara kweUkraine kuburikidza nekudyara kunogona kuwanikwa mu1 mwedzi.
Mhuri yekupinda muUkraine
Nhanho yekutanga yekuwana mvumo yekugara kwenguva pfupi senhengo yemhuri yemumwe mutorwa anogara muUkraine ari kuwana D-Kirasi vhiza kubva kune rimwe remamiriri eUkraine riri kunze kwenyika. Iyi vhiza inoshandiswa kubvumidza kusvika kwenhengo dzemhuri muUkraine kuitira kuendesa chikumbiro chekugara.
Residency Nekudyara chirongwa muUkraine insite
Kuwana mvumo yekugara muUkraine kwakanyanya kuoma nekuti nzira chete yekuiwana zvinoenderana nemvumo yekuenda kune dzimwe nyika. Nekudaro mvumo yekuenda kune dzimwe nyika inopihwa pazvikonzero zvakaita sekuroora mugari weUkraine. Nekudaro kuiwana kuburikidza nekudyara ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Iko kudyara kwe100,000 USD kunogona kuitwa nekutenga chivakwa chekambani. Munhu wacho anogona zvakare kuisa mari muzvikamu zvehupfumi zviri kubuda. Zvakare, munhu wacho anogona kutenga zvigadzirwa muUkraine ndokuzvitengesa kunze kwenyika.
Mari inodiwa kuUkraine
Iko kudyara kunofanirwa kuve kushoma kwe100,000 USD. Ichave sarudzo yehungwaru kuita mari yekunze nekugadzira kambani kana kuve chikamu chemari inobvumidzwa mukambani yeUkraine. Iko mari inofanirwa kunge iri mumari inoshandurwa uye yakaenzana neiyo yakaenzana ne100,000 USD. Mari yacho inofanirwa kunyoreswawo zvichienderana nemutemo. Mari idzo dziri kudyarwa dzinofanirwa kunge dzichibva kunzvimbo dzepamutemo. Iko kudyara kunofanirwa kupa hupfumi hweUkraine. Kutenga chivakwa chekurarama hazvisanganisirwe sechikamu chemari.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweUkraine
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents eUkraine uye Residency ne Investment Lawyers yeUkraine inopa vatengi uye mhuri dzavo muUkraine rutsigiro ugari kubudikidza inivhesitimendi kubva kuUkraine, mugari kubudikidza inivhesitimendi kubva kuUkraine uye dzimwe mari inivhesitimendi mikana, munyika 37 nyika.
Yedu masevhisi haangogumira kune kugara nekudyara kubva kuUkraine kana Golden Visa kubva kuUkraine kana ugari nekudyara kubva kuUkraine kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuUkraine, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Ukraine kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muUkraine uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuUkraine nekugara kwechipiri.
Kutsigira Kwakakosha kwevagari vemuUkraine:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeUkraine, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeUkraine, inokwanisika inishuwarenzi yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuUkraine, inokwanisika Kugara nevekudyara varidzi kuUkraine
Kugara nekudyara kubva kuUkraine kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muUkraine kune 37 Nyika.
Citizenship kubudikidza inivhesitimendi kubva kuUkraine kusvika 37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuUkraine kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Yakavakirwa kutama kubva kuUkraine kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nemapurogiramu ekudyara kubva kuUkraine.
Goridhe visa zvirongwa muUkraine ku37 Nyika.
Citizenship kubudikidza inivhesitimendi zvirongwa kubva kuUkraine kusvika 37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuUkraine kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi mapurogiramu ekupinda kubva kuUkraine kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva neInvestment yeUkraine kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muUkraine nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muUkraine, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweUkraine. Tine tie-up nevashoma vepamberi vavaki vezvivakwa muUkraine vane rekodhi rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muUkraine, kutora zvinodzoka zvakanaka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveUkraine nekudyara muzvivakwa muUkraine.
Unoda kuziva - Ukraine Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta reUkraine rinopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuUkraine. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuUkraine inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utame kubva kuUkraine kana kuenda kuUkraine, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kweUkraine kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeUkraine uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuUkraine, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuUkraine isu tingangoda akaongororwa makopi evatengi uye emhuri nhengo pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuUkraine. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweUkraine uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zve Residence nekudyara kunyorera kuUkraine zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvine chekuita neUkraine.
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweUkraine changobvumidzwa, tinogovana newe nhau dzakanaka uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency neinvestment services muUkraine kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muUkraine:
Residency kubudikidza nekudyara masevhisi eUkraine hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vagoveri vemaoko nema ammunitions kubva kana kuenda kuUkraine.
Residency kubudikidza zvirongwa zvekudyara zveUkraine hadzipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muUkraine kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuUkraine.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweUkraine hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muUkraine.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeUkraine hazvisi zvevanhu vanobata maGenetic zvinhu muUkraine.
Residency kubudikidza nekudyara masevhisi eUkraine hazvisi zvemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine njodzi zvombo zvehupenyu kana nyukireya muUkraine
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweUkraine haruwanikwe kune vanhu veUkraine vanobata mukutengesa, kuchengetedza muUkraine, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeUkraine haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeUkraine hadzisi dzezvitendero uye zvipo zvavo muUkraine.
Residency nebasa rekudyara mu Ukireni haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muUkraine.
Kugara Kwedu magweta muUkraine haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muUkraine.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veUkraine neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muUkraine kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muUkraine.
Kugara nekudyara muUkraine nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muUkraine kune investment, immigration uye real estate kuronga muUkraine.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa neUkraine zviri pamutemo, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nekudyara masevhisi eUkraine inopa yakachipa mitengo, ine yakanakisa inogoneka yekubudirira chiyero cheUkraine.
Takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuUkraine inotsigira vatengi uye mhuri dzavo kuUkraine.
Vanoziva Kugara nekudyara masisitendi eUkraine nevamiriri vepamutemo veUkraine vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veUkraine kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuUkraine uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuUkraine
Tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira Ukraine, kubatsira vatengi kubva kuzere pasirese nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuUkraine kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuUkraine
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweUkraine ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veUkraine, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweUkraine uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeUkraine
Maitiro Ekubvumidza Maitiro kuUkraine
Kwekugara kwenguva pfupi muUkraine
Permanent Residence muUkraine
Citizenity of Ukraine
Embassies uye Consulates rweUkraine
Kugara neInvestment muUkraine uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muUkraine izvozvi kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuUkraine nekudyara mari, isu semumwe wako kuUkraine, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muUkraine nemitengo isingadhuri.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kweUkraine, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muUkraine, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano veUkraine zvichitigadzira one-stop shop yeUkraine nenyika 106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuUkraine mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweUkraine nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-muUkraine nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muUkraine kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muUkraine yakachipa nesu.)
Chero ani investor anotamira kuUkraine angazoda akaundi yebhangi muUkraine uye account yebhangi yekambani muUkraine, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Mari yekubhadhara muUkraine
Kana iwe uchida kubvunza muUkraine, ye dhijitari yekubhadhara mhinduro muUkraine senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muUkraine kana crypto mhinduro, tizivisei.
Mushure meResidency nekudyara ku Ukraine kana uchironga ku tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muUkraine kutanga pakarepo muUkraine.
HR Services muUkraine
Our kambani yevashandi muUkraine inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muUkraine vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeUkraine
Bhizinesi dzenhare masystem eUkraine pamwe ne nhamba chaiyo yeUkraine Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muUkraine
Accounting, zvakakodzera kushingairira muUkraine uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muUkraine
Setup bhizinesi muUkraine
Mushure mekugara patsva nekudyara kuUkraine, setup bhizinesi mu Ukireni.
Isu tinopa pazasi zvataurwa IT mhinduro muUkraine
Kugadzira Webhu muUkraine
Ecommerce Kuvandudza muUkraine
Webhu kuvandudza muUkraine
Kuvandudza kweBlockchain muUkraine
App Kubudirira muUkraine
Software Kubudirira muUkraine
Magweta e Residency neInvestment muUkraine
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuUkraine uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuUkraine, isu tiri vatungamiriri, gweta redu rezvemitemo kuUkraine rine vamiririri vakanakisa vekupinda muUkraine, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa sevhisi sevhisi yeUkraine ne kujekesa nzira dzekudyara mhinduro kuUkraine vanhu pamwe nemhuri dzavo. Yedu Residency neboka rekudyara kuUkraine inopa zvakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweiye Mutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera mvumo yekugara kuUkraine, pane yako mvumo yekugara muUkraine inogamuchirwa.
Simba regweta reUkraine rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevemagweta ekudyara muUkraine. Kana iwe uri muUkraine kana kuronga kushanyira Ukraine, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweUkraine kure, simba rako regweta rinofanira kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeUkraine. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weUkraine.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muUkraine
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muUkraine?
Kugara nekudyara kuUkraine, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara kweUkraine kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUkraine kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kugara kwekugara nekudyara kuUkraine, kugaramo nehurongwa hwekudyara kweUkraine. inotsigirwa nekugara nemabasa ekudyara mari kuUkraine, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muUkraine, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muUkraine uye kugarisana kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuUkraine, vachishanda pekugara zvakanakisa nevamiriri vezvekudyara muUkraine, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda munyika. muUkraine.
Kugara patsva nemabasa ekudyara kuUkraine | Kugara patsva nevamiriri vekudyara muUkraine | Kugara patsva nemagweta eInvestment muUkraine | Kugara patsva nemagweta ekudyara muUkraine | Kugara nekudyara kwekudyara kweUkraine
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muUkraine?
Ugari nekudyara kuUkraine, hunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweUkraine kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUkraine kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muUkraine. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuUkraine, ugari nehurongwa hwekudyara kuUkraine hunotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuUkraine, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muUkraine, ugari hwakanakisisa nemagweta ekudyara muUkraine uye hukama hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kuUkraine. kuva chizvarwa chakanakisa nevamiririri vezvekudyara muUkraine, uye akanakisa mafemu ekushambadzira ekupinda muUkraine.
Affordable Investor immigration services kuUkraine | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika muUkraine | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muUkraine | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muUkraine | Anodhura investor vanoona nezvekupinda kune dzimwe nyika kuUkraine | Affordable immigration law firms kuUkraine
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muUkraine?
Yechipiri pasipoti muUkraine, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weUkraine kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUkraine kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuUkraine, yechipiri pasipoti chirongwa cheUkraine chakatsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eUkraine, kuburikidza nemagweta edu epasipoti epasirese muUkraine, akanakisa echipiri magweta epasipoti muUkraine uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano eUkraine, achishanda pane akanakisa echipiri mapasipoti vamiririri muUkraine, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muUkraine.
Chechipiri pasipoti masevhisi eUkraine | Chechipiri pasipoti vamiririri muUkraine | Chechipiri pasipoti magweta muUkraine | Yechipiri mapasipoti magweta muUkraine | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuUkraine
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muUkraine?
Ndarama vhiza muUkraine, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeUkraine kuburikidza nekudyara muhupfumi hweUkraine kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuUkraine, chirongwa chegoridhe vhiza yeUkraine inotsigirwa ne goridhe vhiza masevhisi eUkraine, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta muUkraine, akanakisa egoridhe vhiza magweta muUkraine uye akanakisa endarama vhiza ma consultant eUkraine, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muUkraine, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa mafemu muUkraine.
Ndarama vhiza services kuUkraine | Ndarama vhiza vamiririri muUkraine | Magoridhe vhiza magweta muUkraine | Magoridhe vhiza magweta muUkraine | Ndarama vhiza vanopa mazano kuUkraine
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muUkraine?
Minimum inivhesitimendi yeHurumende nekudyara muUkraine maEUR 100,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo rweUkraine yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muUkraine nevamiriri muUkraine vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muUkraine.
Kugara nekudyara kuUkraine kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuUkraine uye Kugara nekudyara mari zvinodiwa kuUkraine ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubhadharisa fizi ye Residency neInvestment kuUkraine, isu tinopawo mijenya yezvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeipi nyika vagari vanogona kunyorera Residency nekudyara kuUkraine kana investor vhiza kuUkraine?
Kugara patsva nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma Kugara nekudyara kuUkraine kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuUkraine kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuUkraine kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuUkraine kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuUkraine kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuUkraine kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuUkraine kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuUkraine kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuUkraine kubva kuNepal, Kugara nekudyara kuUkraine kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuUkraine kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeUkraine
Kumbira Mahara kubvunza kune yako Kugara neInvestment kuUkraine
Mazwi akakosha muResidency neInvestment yeUkraine
Ministry of Tsika uye Tourism of Ukraine
Ministry of Emergency uye Nyaya dzehuwandu hwekuchengetedzwa kwevanhu kubva kuMigumisiro yeChornobyl Catastrophe
Ministry of Health yeUkraine
Constitutional Dare reUkraine
Ministry of Agrarian mutemo uye Chikafu cheUkraine
Ministry of Economic Development uye Trade of Ukraine
Chikumbiro cheVAT chekudzorera
Verkhovna Rada (Paramende) yeUkraine
Maitiro ekurairidza uye kushandiswa kweHoro yeRuzivo rweMabasa
Ministry of Ecology uye Natural Natural yeUkraine
Ministry of Defense yeUkraine
Dare Repamusoro soro reUkraine
Ministry of Justice rweUkraine
Kunyoresa fomu kune vamiririri vevashandi
Ministry of Labour uye Social Nharaunda YeUkraine
Ministry of Yemukati ZvekuUkraine
Dare remakurukota eUkraine
Yakakwirira Inosarudzika Dare reUkraine for Civil uye mhosva mhosva
Ministry of Finance yeUkraine
Iyo High Council yeRuramisiro
Curriculum Vitae yemuteedzeri wemutungamiriri wedare remakurukota rekuremekedza
Ministry of Regional Development uye Kuvaka kweUkraine
National Chikoro cheVatongi veUkraine
Consular officer application (kubvumidzwa)
Dare Repamusoro-soro reUkraine
Ministry of Foreign Affairs yeUkraine
Ministry of Coal indasitiri yeUkraine
Ministry of Ukraine ye Mhuri, Vechidiki neMitambo
Chibvumirano chekugadziriswa kwemunhu
Ministry of Transport uye Kutaurirana kweUkraine
Fomu rekunyoresa kwevashandi vekutungamira nehunyanzvi
Dare Repamusoro Rokutengeserana reUkraine
Link to Department of Immigration rweUkraine , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muUkraine